Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyada Malta oo Shir Balaadhan Iskugu Yimid – Daawo Sawiro cusub
Jaaliyada Malta oo Shir Balaadhan Iskugu Yimid – Daawo Sawiro cusub
Waxaa maalinimadii shalay ahayd ooy taariikhdu kubeegnayd 31\_5\_2014 shir aad ubalaadhan oo si heer sare ah loosoo agaasimay kaasoo ay iskuguyimadeen Jaaliyada Soomalida Ogadeniya ee Jaziirada Malta.
Kulankan ayaa lugu furay aayadaha Quraanka Kariimka ah iyo wacdi diini ah oo kusaabsan xalaaltinimada Halganka Somalida Ogadenya ee ladoonayo in lagaga xoreeyo ciida hooyo Gumaysiga Wayaanuhu hormuudka uyahay ee wakhtigiisu dhamaaday. Intaas kabacdi waxaa lagudagalay sidii loo xoojinlahaa Halganka Somalida Ogadenya isla markaana loogaadhsiin lahaa beesha caalamka gumaadka iyo dhibaatooyinka joogtada ah ee bulshada Ogadenya ay kujiraan.
Halganka S.Ogadenya ayaa maanta maraya marxalad aad usaraysa iyadoo aysan cad-ceedu maanta kadhicin calanka Ogadenya. Sidoo kale waxaa sii xoogaysanaya oo maalinba maalinta kadambaysa hor usii kacaya waxqabadka iyo horumarka Jaaliyaadka Ogadenya taasoo daliil u ah heerka bisaylka iyo rabitaanka shacbiga Somalida Ogadenya dal iyo dibadba uu maanta marayo.
Dhanka kale siduu noosheegay Kuxigeenka Hogaanka Abaabulka iyo Arimaha Ururka (HAAU) waxaa mudo kooban gudahood laqorshaynayaa in Jaaliyad cusub laga yagleelo wadanka Turkiga ooy kudhaqanyihiin shacab tiro badan oo kasoo jeeda Somalida Ogadenya. Jaaliyada Turkiga ee lafilayo ineey kusoo biirto Jaaliyaadka Somalida Ogadenya ee kahawl gala shanta qaaradood ee aduunkan aan ku noolahay.
Jaaliyada Malta oo kamid ah jaaliyaadka Somalida Ogadenya ee dunida dacaladeeda kahawl gala yaa la,aas aasay bil uun kahor. Kulankan ay jaaliyadu iskugutimid ayaa yimid kadib markii maamulka jaaliyada iyo ururka Dhalinyarada iyo Ardayda Ogadenya ee OYSU ay siwadajir ah ooga qaybgaleen hawlo abaabul iyo wacyi-galin iskugu jira kuwaasoo loogu talogalay horumarinta iyo dardar-galinta geedi socodka hawllada halganka Ogadenya.
Falanqayn iyo dood balaadhan ooy xubnaha Jaaliyadu iswaydaarsadeen kabacdi ayaa shirka lagu soogaba gabeeyay is afgarad iyo jawi aad uwanaagsan, kaasoo la,isku balansaday in horay loosiiwado waxqabadka iyo horumarinta Halganka Ogadenya.